बिहे भोजमै बेहुलाले गरे बेहुलीको हत्या, पाहुना तमासे बनेर बसे ! – Chautari Online
बिहे भोजमै बेहुलाले गरे बेहुलीको हत्या, पाहुना तमासे बनेर बसे !
October 8, 2020 626
एजेन्सी, २२ असाेज । बिहेकै दिन बेहुलाले कुटेर बेहुलीको हत्या गरेका छन् । घटनाको रुसको नोबासिबिरिकको हो । ३३ वर्षका यी बेहुलाले अन्य पाहुनाकै अगाडी बेहुलीलाई कुटेर मारेका हुन् । ओकासाना नामकी बेहुली ३६ वर्षकी थिइन् । डरका कारण बेहुलीलाई बचाउन भने कोही पनि सरेनन् । यस पार्टीमा सबै पाहुनाहरु रक्सीले मातेका थिए ।
प्रहरीले आरोपित युवकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरी स्रोतकाअनुसार स्टिफन डोलगिख नामका यी युवक यसअघि पनि हत्या तथा लुटपाटको आरोपमा जेल बसिसकेका छन् । डोलगिखले पुरानो अपराधका लागि जेल जीवन बिताइरहेका बेला ओकसानासँग उनको चिनजान भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसपछि उनीहरुले बिहे गर्ने फैसला गरेका थिए । स्थानीय प्रहरीकाअनुसार बिहे भोज चलिरहेका बेला बेहुला–बेहुलीबीच झगडा भयो, त्यसपछि बेहुला आवेशमा आए । रक्सीले मातेका बेला अन्य एक युवकको डाहा लागेपछि उनले श्रीमतीमाथि कुटपिट थाले ।
अनुसन्धान खटिएका प्रहरी किरिल पित्रुसिनका अनुसार यी युवकले युवतीमाथि मुक्का प्रहार गर्ने र उनलाई लात्तीले हान्ने काम पाहुनाहरुकै अगाडि गरेका थिए । त्यसपछि उनले घरभित्र लगेर थप कुटेको, कपाल तातेर टाउकोमा हिर्काएर र सडकमा लगेर फालेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
दुलहीले खराब व्यवहार गरेका कारण आफ्नो होश गुमेको र घटना घटेको प्रतिक्रिया दुलाहाले दिएका छन् । ‘ओकसानालाई डोलगिखको आपराधिक विगत थाहा थियो, उनले सुधार्न सकिन्छ कि भनेर यी युवकसँग बिहे गरेको देखिन्छ,’ किरिलले भने ।
Prevनराम्रो सपना देख्ने,राती निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ भने यस्तो उपाय अपनाउनुहोस
Nextट्युमरले आधा अनुहार ढाकिएका र दृष्टि गुमाएका नेपालीले अमेरिका पुगेर पाए नयाँ जीवन
शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यालयका प्रिन्सिपलबाट अभिभावकलाई निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले खुट्टा भाँचिदिए!!
तातो पानी पिउँदा शरिरमा के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छ ?
बिहीबारको दिन गर्नुहोस यस्ता काम मिल्ने छ यस्तो सफलता